ချေးငွေပုံမှန်လဲလှယ်မှုနှုန်း - World Trade Exchange
ကမ္ဘာ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ကြွေးမြီများကိုပြန်မဆပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၂၀၂၀ COVID-LED ပြန့်ပွားမှုကြောင့်အတိုးနှုန်းများဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်တစ် ဦး ချင်းငွေချေးယူသူများသည်သူတို့၏အကြွေးများကိုပြန်ဆပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် covid ဦး ဆောင်သောအနှောင့်အယှက်များကြောင့်အတိုးနှုန်းများကိုမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ covid ဦး ဆောင်သည့်အနှောင့်အယှက်များကြောင့်ငွေချေးသူများကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မကြုံစဖူးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်ချေးယူသူများ၏အကြွေးပြန်ဆပ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်အတိုးမဲ့မဟုတ်သောချေးငွေများ (NPLs) သိသိသာသာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ (NPA) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ငွေချေးသူအများစုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ချေးငွေပျက်ကွက်မှုများဘဏ်များနှင့်အခြားဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ငွေစီးဆင်းမှု၊ ဝင်ငွေ၊ အမြတ်၊
၂၀၂၀ ခုနှစ် covid ဦး ဆောင်သောအနှောင့်အယှက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမကြာသေးမီကကြွေးမြီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ ပျက်ကွက်မှုများနှင့်ထင်ရှားသောဒေဝါလီခံမှုများစီးဆင်းမှုသည်ချေးငွေထိတွေ့မှုအားစီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိစေသည်။ သင်၏ချေးငွေကဏ္inတွင်အကြွေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာအဘယ်နည်း။
ဘာဖြစ်သလဲ WTE ချေးငွေ default လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်?
WTE credit default swap သည်သင်၏ချေးငွေများနှင့်အခြားဘဏ္assetsာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကိုပေးချေမှုမရှိခြင်း၊ ပျက်ကွက်မှုများ၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းလျှော့ချခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များမှကာကွယ်ရန်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
CDS သည်အန္တရာယ်များ၊ ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ချေးငွေအဖြစ်အပျက်များမှကာကွယ်ရန်ချေးငွေများနှင့်ဘဏ္ASာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်သည်။
သင်၏ချေးငွေများနှင့်ဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများသည်မပြည့်စုံပါက၊ ROI မပေးပါ၊ မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုကိုမဆိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပျက်ကွက်လျှင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းစာအုပ်၏ ၁၀၀% ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးကို CDS မှရရှိမည်ဟုအာမခံသည်။
သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလျံ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလျံနှင့်အထက်ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ယခုအခါပြန်လည်ချေးယူပြီးသင်၏ချေးငွေများ၊ ချို့တဲ့သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စုဆောင်းထားခြင်းမရှိသောရထိုက်သည့်ငွေများအားလုံးကိုစုစုပေါင်းစာအုပ်တန်ဖိုးဖြင့်အကြွေးအန္တရာယ်ကိုလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်အပြည့်အဝလျော်ကြေးရယူနိုင်သည်။ WTE အချို့သောပရီမီယံလဲလှယ်အတွက်။ “ ပုံမှန် swap ပရီမီယံ” သည် ၀ ယ်သူကပေးဆောင်ရန်သဘောတူသောပရီမီယံ (သတ်မှတ်ထားသောနှုန်း) ဖြစ်သည် WTE အကြွေးအန္တရာယ်များ၏အပြောင်းအရွှေ့လဲလှယ်အတွက်။
Credit Default Swap ၏ဥပမာ ၁
# ပုဂ္ဂလိကအိမ်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထုတ်ပြန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။
●ပုဂ္ဂလိကအိမ်ရာကုမ္ပဏီကပြန်ဆပ်တာကိုပျက်ကွက်မယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှုကစီဒီအက်စ်ကို ၀ ယ်လိမ့်မယ် WTE။ ဒီစီဒီကဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ တန်တယ်။
# ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုကဒီချေးငွေပုံမှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကို ၁% ရာခိုင်နှုန်းအတိုးပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင်စာချုပ်သက်တမ်းအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀,၀၀၀ ပေးချေမှုများပါ ၀ င်နိုင်သည်။
● အကယ်၍ ပုဂ္ဂလိကအိမ်ရာကုမ္ပဏီကပျက်ကွက်လျှင် WTE ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်အားဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ လျော်ကြေးပေးမည် - Credit Default Swap ၏တန်ဖိုး။
●ထို့ကြောင့် WTE ပိုပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအန္တရာယ်အပေါ်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့် $ 500 သန်းပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
# အမေရိကတိုက်ဘဏ်သည်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံငွေချေးစာချုပ်ပုံစံဖြင့် GM အားငွေထုတ်ချေးခဲ့သည်ဆိုပါစို့။
●အမေရိက၏ဘဏ်မှ Credit default Swap ကို ၀ ယ်နိုင်သည် WTE.
● အကယ်၍ GM ကချေးငွေအပေါ်ပျက်ကွက်လျှင် WTE အမေရိကဘဏ်ကိုချေးငွေတန်ဖိုးပေးလိမ့်မယ်။
# ထို့ကြောင့် Bank of America သည်ချေးငွေပျက်ကွက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ WTE GM သည်ချေးငွေကိုမပျက်ကွက်သရွေ့အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
# ငွေချေးရန်ပိုမိုအန္တရာယ်များလေ၊ ခရက်ဒစ်ပုံသေလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သောပရီမီယံများလေလေ။
တက်စလာသည်ဤဥပမာတွင် ၁၀ နှစ် ၈% ငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၅ ဘီလျံတန်ထုတ်ပေးသည်။
Barclays Bank တွင်ငွေအပိုလျှံငွေများရှိပြီးအတိုးမ ၀ င်သောကြောင့် Tesla ၏ငွေချေးစာချုပ်ကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်သည့်အေဂျင်စီတစ်ခုက Tesla အား BB အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် Barclays Bank မှချေးငွေကိုပုံမှန်လဲလှယ်ခြင်းမှရယူခြင်းသည်အကျိုးရှိမည်ဟုထင်သည် WTE.
စာဖြင့်ရေးသားထားသည့်စာချုပ်တွင် Barclays Bank သည်ငွေချေးစာချုပ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အတိုးနှုန်း၏ ၁% ကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည် WTE။ ပြန်လာအတွက် WTE သူတို့ရဲ့ငွေပေးချေမှုအပေါ်တက်စလာပျက်ကွက်ခြင်းမှကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ တက်စလာသည်၎င်း၏ငွေပေးချေမှုအပေါ်ပျက်ကွက်လျှင် WTE Barclays ဘဏ်ကိုချေးငွေတန်ဖိုးပေးလိမ့်မယ်။
LIBOR + ၂.၂% နှင့်ညီမျှသောပုံမှန်အတိုးနှုန်းကိုလိုအပ်သောဘဏ်တစ်ခုသည် Chrysler သို့ငါးနှစ်ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ချေးခဲ့သည်။
ဘဏ်၏ပေါ်လစီသည်ချေးငွေအားလုံးအားကျောထောက်နောက်ခံပြုရန်လိုအပ်သည် WTE ချေးငွေ၏အဓိကငွေပမာဏအပေါ်အကြွေးပျက်ကွက်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်။ ဤကိစ္စတွင်ဘဏ်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ရှိသည့် CDS တစ်ခုကို ၀ ယ်နိုင်သည် WTE.
CDS သည် ၁% ကျသင့်သည်။ ဘဏ်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏ၏ ၁% နှင့်ညီမျှသောပမာဏကိုပေးရမည် WTE နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ နှစ်စဉ်ပရီမီယံဒေါ်လာ 4,000,000 (1% × $ 400 million) ရှိသည်။
အကယ်၍ Chrysler သည်အဓိကကျသောငွေပေးချေမှုကိုပျက်ကွက်ပြီးဘဏ်သည်၎င်း၏မူလငွေ၏ ၅၀% ကိုသာကောက်ခံပါက၊ WTE။ သူတို့ထံမှရရှိမည့်ပမာဏ WTE ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 200 million ($ 400 million × (1 - 50%)) ။
နမူနာ5ချေးငွေပုံမှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏
ဘဏ် ABC မှကုမ္ပဏီ XYZ £ 10B ကိုချေးငှားသည်။ ထို့နောက်ဘဏ် ABC မှ Credit Default Swap မှ ၀ ယ်သည် WTE.
အကယ်၍ Company XYZ သည်ချေးငွေအပေါ်ပျက်ကွက်လျှင်၊ WTE ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချေးငွေ၏တန်ဖိုးပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ် WTE ချေးငွေပုံမှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူအန္တရာယ်အပေါ်ကိုယူ။
Company XYZ ကချေးငွေကိုမပျက်ကွက်ပါက၊ WTE Credit Default Swap အတွက်ဘဏ် ABC မှပေးသောငွေကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် Bank ABC သည် credit default swap ဖြင့်အကျုံးဝင်သည် WTE ကုမ္ပဏီ XYZ ပျက်ကွက်လျှင်။
CDS အတွက်ပေးဆပ်ရမည့်ငွေပမာဏသည်ချေးငွေမည်မျှအန္တရာယ်ရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ Company XYZ တွင်အကြွေးအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျပါက Bank ABC မှပေးသောငွေပမာဏဖြစ်သည် WTE မြင့်လိမ့်မည်
နမူနာ6ချေးငွေပုံမှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏
BP သည် Shell မှထုတ်ပေးသော ၁၀ နှစ်ငွေချေးစာချုပ်မှာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၁ သိန်းနှင့်သိန်းနှင့်ကူပွန်အတိုးနှုန်းဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ရှိသည်။
Shell သည်၎င်း၏နှောင်ကြိုးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုပျက်ကွက်လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်သောကြောင့် BP နှင့်အတူ CDS သို့ ၀ င်ရောက်လာသည် WTE နှင့်ပေးချေရန်သဘောတူသည် WTE ငွေချေးစာချုပ်၏နှစ်စဉ်အတိုးပေးချေမှုနှင့်အတူနှစ်စဉ်နှစ်စဉ် $ 20,000,000 ၏ဝင်ငွေငွေပေးချေ။
ပြန်လာအတွက် WTE BP အနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်အပေါ်ကျန်ရှိသောအတိုးများအပြင် (ကျန်ရှိသောနှစ်အရေအတွက်နှင့်မြှောက်ထားသည့်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀) အပြင် BP အနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်၏ဒေါ်လာ ၁ သိန်းတစ်သိန်းတန်ဖိုးကိုပေးရန် BP မှသဘောတူသည်။ အကယ်၍ Shell သည်ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ရင့်ကျက်မှုမှတစ်ဆင့်ငွေချေးစာချုပ်နှင့်ပါတ်သက်သည့်တာဝန်ကိုကျေပွန်ပါက၊ WTE နှစ်စဉ် $ 20,000,000 ငွေပေးချေမှုအပေါ်အမြတ်အစွန်းလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ငှားရမ်းသူမှချေးငွေကိုပျက်ကွက်လိမ့်မည်ဟုသင်စိုးရိမ်ပါကထိုဆုံးရှုံးမှုကိုထေမိရန်သို့မဟုတ်လဲရန်အတွက် CDS ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံသေသတ်မှတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲရန် CDS မှသင်ဝယ်မည် WTE 1% ပရီမီယံမှာ။ ပြန်လာအတွက် WTE - အကယ်၍ ကြွေးမြီထုတ်ပေးသူ (ငှားရမ်းသူ) သည်အကြွေးအဖြစ်အပျက်ကိုပျက်ကွက်လျှင်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့လျှင် - WTE ထိုအချိန်နှင့်လုံခြုံရေးရင့်ကျက်သည့်နေ့ရက်များအကြား၌အခြေချခဲ့သည့်အတိုးနှုန်းများအားလုံးကိုသင့်အားလုံခြုံရေးတန်ဖိုးနှင့်ပေးချေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, WTE ငှားရမ်းသူမှပျက်ကွက်လျှင် (များသောအားဖြင့်ချေးငွေ၏အတိုးနှုန်း) သင့်အားပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စီဒီအက်စ်တစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံချေးငွေနှင့်ဝယ်ယူပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်အကြွေးပျက်ကွက်လျှင်၊ WTE မင်းကိုဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံပေးမယ်။
အကြွေးက default လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ
CDS သည်သင့်အားအကြွေးအန္တရာယ်များကိုလွှဲပြောင်းရန်ကူညီသည် WTE နောက်ခံနှောင်ကြိုးသို့မဟုတ်အကြွေးပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာအုပ်များမှငွေချေးခြင်းများကိုမပေးဆပ်ရန်၊ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ဒေဝါလီခံခြင်း၊ အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်လျှော့ချခြင်း၊ တာ ၀ န်အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ သင်၏အကြွေးအန္တရာယ်များကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်း၊ သင်၏အကောင့်များကိုကာကွယ်ထားပြီးသင်၏ငွေပေးချေမှုများကိုအာမခံထားသည်ကိုသင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရနိုင်သည်။
၁။ BANKRUPTCY - ရည်ညွှန်းထားသောအဖွဲ့သည်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသညျသို့မဟုတျ၎င်းငျး၏ကြွေးမြီကိုမဆကျနိုငျတော့ပါ။
၂။ ပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ ရည်ညွှန်းထားသည့်အဖွဲ့အနေနှင့်အတိုးအတိုးများသို့မဟုတ်ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်။
၃။ ကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း - အကြွေးဝယ်သူကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်မှုရှိစေရန်ကြွေးမြီတာဝန်ယူမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၄။ တာ ၀ န်ခံမှုအရှိန်လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ပေးမှုပျက်ကွက်ခြင်း - ထုတ်ပေးသူ၏ကြွေးမြီဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများသည်၎င်းတို့၏ကန ဦး သတ်မှတ်ထားသည့်ရင့်ကျက်သည့်နေ့မတိုင်မီကြောင့်ဖြစ်လာသည်။
၅။ ပြန်လည်ရေတွက်ခြင်း / မြှင့်တင်ခြင်း - နောက်ခံငွေချေးစာချုပ် (ရည်ညွှန်းအဖွဲ့) သည်ထုတ်ပေးသူသည်သူတို့၏ကြွေးမြီများကိုငြင်းဆန်ပြီးအကျိုးစီးပွားနှင့်ချေးငွေကိုဆပ်ရန်ထိရောက်စွာငြင်းဆန်သည်။
သင်၏ဝင်ငွေ၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု၊ အကျိုးအမြတ်နှင့်ငွေလက်ကျန်အကာအကွယ်ကိုကာကွယ်ပါ
သင်၏ငွေချေးသူ၊ ဝင်ငွေ၊ အမြတ်၊ အမြတ်၊ အရင်းအနှီးနှင့်လက်ကျန်စာရင်းများအပေါ်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်နိုင်သည့် CDS သည်သင့်အားငွေပေးချေမှုမရှိခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ဒေဝါလီခံခြင်းသို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် CDS တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေ၊ အမြတ်၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု၊ အရင်းအနှီးနှင့်ငွေလက်ကျန်များကိုသေချာစေရန်အတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ပြုလုပ်နိုင်သောအပညာအရှိဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်သည်။
CDS သည်သင့်အားငွေပေးချေမှုမပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များမှကာကွယ်ပေးရုံသာမကသင်၏ကြွေးမြီပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်လည်း CDS ကခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏အကြွေးမကောင်းသောအရံငွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပိုလျှံသောကြွေးမြီပမာဏကို ၀ င်ငွေအဖြစ်သို့ပြန်လည်ယူဆောင်လာနိုင်သည်။ ပရီမီယံများသည်အခွန်နှုတ်ယူပြီး (သင်၏အကြွေးမကောင်းသောအရံမဟုတ်ပါ) ။
CDS သည်သင့်အားချေးငွေဆိုင်ရာစွန့်စားမှုများမရှိဘဲသင်၏ချေးငွေလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုသည် WTE) ။ သင်သည်လက်ရှိဖောက်သည်များနှင့်အကြွေးဝယ်လိုင်းများကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်စေ၊ အပြိုင်အဆိုင်ချေးငွေစည်းမျဉ်းများကိုအကောင့်အသစ်များသို့တိုးချဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ CDS ကိုအသုံးပြုပြီးခရက်ဒစ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာကြီးထွားစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရသောဝင်ငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းကို ၁၂ လကျော်အာမခံရန်နှင့်မသေချာမရေရာမှု၊ ပျက်ကွက်မှု၊ ရောင်းအားနည်းခြင်း၊ ငွေစီးဆင်းမှုနည်းခြင်း၊ အမြတ်နိမ့်ခြင်း၊
အဆိုပါ WTE မမျှော်လင့်သောဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါက CDS သည်သင်၏ဝင်ငွေ၊ အမြတ်အစွန်း၊ ငွေစာရင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားငွေကြေးဆိုင်ရာကပ်ဘေးဆိုင်ရာအကြွေးအဖြစ်အပျက်မှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်စီဒီအက် (စ်) သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမြတ်အစွန်း၊ ငွေစီးဆင်းမှု၊ အရင်းအနှီးနှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုအကာအကွယ်ပေးရန်သေချာစေသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများနှင့်တစ် ဦး ချင်းငွေချေးယူသူများသည်သူတို့၏အကြွေးများကိုပြန်ဆပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် covid ဦး ဆောင်သောအနှောင့်အယှက်များကြောင့်အတိုးနှုန်းများကိုမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ်များနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်ချေးငွေမရရှိသောချေးငွေများ (NPLs) သိသိသာသာမြင့်တက်မှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ (NPA) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ငွေချေးသူအများစုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ချေးငွေပျက်ကွက်မှု၊ ကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ , အရင်းအနှီးနှင့်ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်များ။
နှင့် WTE credit default swap, သင်သည်သင်၏ချေးငွေစာရင်းများတွင်ချေးငွေအန္တရာယ်စောငျရနျး, အကြွေးထိတွေ့မှုဖယ်ရှားပစ်နှင့် 24 နာရီအတွင်း non-performance ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၈ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်